အကောက်ခွန် Inflatables ထုတ်လုပ်သူ Inflatable ရွက်ဖျင်တဲ, Stunt လေအိတ်, ရောင်းရန်အတွက် Inflatable Water Park | ရွှင်လန်းမှု
စက်ရုံပညာရှင်ထုံးစံဖောင်းကြွတဲများနှင့်ငွေချေးနိုင်သောဥယျာဉ် - Joy Inflatable ။
inflatable w ရာတဲ
inflatable Cube တဲ
0.9mm PVC tarpaulin coated vinyl
30 ° 30 မီတာအလေးချိန်: 1500kg
JOY သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ ရေပန်းဥယျာဉ်၊ လေထိုးသောတဲနှင့်လေအိတ်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အဓိကထုတ်ကုန်များမှာလေထိုးနိုင်သောရေလျှော၊ ရေပေါ်ရေပန်းခြံ၊ တဲထိုးပေါက်၊ ဖောင်းအားကစား၊ လေအိတ်၊ လေထိုးကြော်ငြာများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
PVC အပြင်ဘက်အမိုးခုံးစခန်းများ Bubble Hotel သည် Clear Clearstal Crystal Crystal တဲသို့ရောင်းရန်
PVC Air Outdoor Dome Camping Tree Luxury Hotel သည် Sene For Sale For Sence Crystal တဲ။ Clear Bubble Brother Centriend ပညာရှင်ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူသည်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောရှင်းလင်းသောတဲကိုထုတ်လုပ်သည်။ Clear Babble Hentret တွင်စခန်းချခြင်း, ဟိုတယ်, ပါတီပွဲများကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ မတူညီသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကို Camping Camping Camping Camping, Contact Mondic Build. Burmable Burmed Burmed Burmed Burmese ။
ရေငုပ်ဖွယ်လေယာဉ်ပျံ Bubble Dome Dome Covering အတွက်မိုးမြက်ခင်းတဲများအတွက်။0င်ရောက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဖောက်သည်များအတွက်လေကြောင်းရောင်ခြည်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကယ်. သင်သည်စခန်းချခြင်းအတွက်ရှင်းလင်းသောတဲများကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ရောင်းရန်ပူဖောင်းတဲများရောင်းချရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ပြင်ပစခန်းချခြင်းအတွက်ရှင်းလင်းသောအလင်းအမှိုက်တဲ။0င်ရောက်ခြင်းဖှဲ့ bublatable လေထုပုန်းအခန်းများကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်များတွင်အလွန်ကောင်းစွာရောင်းချပြီးဖောက်သည်များစွာနှင့်လူကြိုက်များသည်။ ၎င်းတွင်စခန်းချခြင်း,
နှင်းလျောစီးလေအိတ်မြေယာလုံခြုံမှုသေတ္တာ Safet Safet Safer Air Bag + https: //www.jjjotable.com
စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း - ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထုတ်ကုန်များ၏စတိုင်၊ အရောင်၊ အရွယ်အစား၊ လက်ရာနှင့်သုံးစွဲသူ၏ငွေကိုအတည်ပြုပါ။ ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်စိုးရိမ်မှုများအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်မူကြမ်းကိုဆွေးနွေးပါ။
ဖြေရှင်းချက် -3D ပုံဆွဲတွေဟာဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပါစေ။ ဖြေရှင်းချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်တိုးတက်အောင်; ဖြေရှင်းချက်အပေါ်အထူးမှတ်စုနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအမိန့်ထုတ်လုပ်ပါ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု: ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆွဲရန်စက်ရုံအမိန့်အရ; ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားအတိုင်းဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးဖောက်သည်များအတွက်အတည်ပြုဗီဒီယိုများယူပါ။ ထုတ်ကုန်ကိုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်စဉ်အတွင်းဗီဒီယိုကိုယူပါ။
အရောင်း / ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အပြီး - ဆက်စပ်ဗီဒီယိုများပေးပို့။ ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ပေးပို့ခြင်း ပြန်လည်ပတ်ငွေပေးချေမှုအသုံးပြုမှုအခြေအနေသွားရောက်ကြည့်ရှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့မှဝယ်ယူသူများ၏တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်မြင်ကွင်းမှရိုက်ကူးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဖောင်းပွပစ္စည်းများကိုစမ်းသပ်သည့်အခါဤဗီဒီယိုအားလုံးကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ပုံသဏ္,ာန်, ဖွဲ့စည်းပုံ, စွမ်းဆောင်ရည်, အရောင်နှင့်အသုံးပြုမှုကိုအဓိကထင်ဟပ်။ သို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည်။
Guangzhou Joy Inflatable Limited သည်ရေပန်းဥယျာဉ်၊ လေထိုးနိုင်သောတဲနှင့်လေအိတ်တွင်အထူးပြုထားသောစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင်၏တည်နေရာအတွက်သင့်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားတိကျသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့်အတိုင်းအတာများနှင့်ကိုက်ညီမည့်သီးခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူမည်သည့်အစီအစဉ်သည်ပျော်စရာကောင်းသည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဖျော်ဖြေရေးနေရာများ၊ ပြပွဲများ၊ စွန့်စားခန်းများ၊ မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရေပန်းဥယျာဉ်များ၊ ဖျော်ဖြေရေး / အပျော်တမ်း / အားကစား / ခရီးသွား destination ည့်နေရာများစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်လမ်းပေါ်တွင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗဟုသုတနှင့်နည်းပညာအသစ်များသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းစဉ်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ act မှပါဝင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိအလုပ်သမားများ၊ အဆင့်မြင့်စက်များနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပေါ် အခြေခံ၍ အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောငွေဖောင်းပွမှုများကိုပေးနိုင်သည်။
ဖောင်းနေသောတဲများနှင့်ရေပန်းဥယျာဉ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်။ အရောင်၊ အရွယ်အစား၊ စတိုင်၊ အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း၊ လက်ရာ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းစသည့်ထုံးစံအမျိုးမျိုးကို SGS, CE, UL နှင့်အခြားပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးသည်။